Suldaan Xasan:”Orodyahankii xoolo raacatadda ahaa ee usoo baxay Iswiidhan” | Somaliska
Xilliggu wuxuu ahaa xaggaagii 2013-kii markii uu ka soo dhex muuqday garoonka ciyaaraha fudud lugu qabto ee Slottsskogsvallen, ka dib markuu Suldaan Xasan oo ahaa 15 jir ay macalimiintiisi iskuulka kula taliyeen in ka qeyb qaato orradada fudud ee loogu magac daray Skol-DM.
Tartankaas wixii ka dambeeyey Suldaan wuxuu bilaabay inuu tababbaro la sameeyo ardeyda ay isku da’da yihiin ee iskuulkiisa, arrintaani waxeey dhabaha u xaartay riyo ka mid ah kuwii u ku riyoonayey. Waxeey macalimiintiisii ku dhiira geliyeen inuu ka qeyb qaabto tartanka ciyaaraha fudud ee lugu qabto Göteborg.
Tababaraha lugu magacaabo Curt Roland Ljung, markuu arkay orodka Suldaan waxaa uu durba dareemay heybda Suldaan ee u leeyahay xagga orod-ka. “Odeyga caadi maahan” ayuu ku guuxay markii ugu horeeysay ee arkay Suldaan Xasan oo orodkii tababarka ahaa ka soo baxay keligiis. Afar sanno ka dib Suldaan Xasan waa orodyahan-ka labaad ee ugu dheereeya marka laga hadlayo da’yarta loo diyaarinayo orodada ee juunyeer-ka.
“Waa heybaddii ugu weyneeyd ee abid Iswiidhan soo marta, inkastoon aniga aheyn qof dadka qasba soo jiida haddana haddii uusan Xasan soo laaban laheyn ka dib tababarkiisii ugu horeeyey waxaa hubaal ah inaan wici lahaa” ayuu yiri tabare Roland Ljung oo ka hadlaayey orodyahan da’da yar ee u arko inuu yahay mustaqabal u soo ifaya Iswiidhan.
“Ma garanaayo waxaan sameeyn lahaa haddaanan orodkaan sameeyn laheyn, berigii hore si aan tababar u sameeyo waxaan u dhaxeeyn jiray Göteborg iyo Alinsås, hadase meel kasta ayaan tagaa, berigigeyii hore ee aan Soomaaliya ku noolaa waxaan aheeyn xoolo dhaqato, hadase safarkeeygaan waa mid qaas u ah oo bilow iiah ah” ayuu yiri Suldaan oo ka hadlayey dareenkiisa la xirriira isbadaladda xagga noloshiisa ah tan iyo markii uu Iswidhan xaggaha soo dhigay.
Dhinaca kale Suldaan oo hadda ku dhex jira badweynta orodada juunyeer-ka ayaa waxaa u biloowday tababaro xoogan oo lugu doonayo in lugu soo saaro ka hor intaaneey dhamaan bishan luulyo. Suldaan ayaa sidoo kale talaabadan uu ku taloowsaday ay ula muuqataa mustaqbal fiican oo dhinaca orodada ah oo u soo ifaya.
“Berigii hore waxaan ku fekiri jiray oo keliya inaan noqdo orodyan, hadase waxaan u diyaar garoobaya inaan isku sharaxo qaadashada bilad” ayuu yiri.
Suldaan Xasan waa wiil da’yar oo sida muuqata aad u daneeynaya inuu noqdo orodyahanka ugu dheereeya xagga orodada da’yarta ah, balse indhihiisa mid ka mid ah ay dhaawacan tahay, waaxaa ka muuqda raadkii dhaawac ka soo gaaray. Mar uu ka hadlaayey sababta isha uga dhaawacan yahay waxa uu sheegay mar uu reerkiisa ka caawinayey geel diiday inuu xerrada soo galo oo ul soo qaatay taas oo ay isha midig ka muday.
Orodada inta badan ka caanka ah dalalka deriska lah Soomaaliya ayaa la tirayaa ineey yihiin Kenya iyo Itoobiya, dib u dhaca dhinacaas Soomaaliya ka heeysta ayaa sabab u ah dagaalka daba dheeraaday iyo xasilooni xummadda siyaasadeed eeka jirta. Waxeey arrimahaasi dib u dhigeen rajo kasta oo dhalinta soomaaliyeed ee jecel ciyaaraha fudud, ma muuqato waqtigaan xaadirka ah ama mustaqbalka dhow dowlad awood leh oo dhinacaas ka gacan siisa, saas oo ay tahayna Suldaan Xasan hadafkiisa waxaa inuu la mid noqdo orodyahanadda soomaaliyeed ee Maxamed Faarax iyo Mustafe Maxamed oo iyagu meelo sare ka gaaray orodka dheer.
Ugu dambeyntii tababaraha Suldaan Curt-Roland waxaa uu aad ugu faraxsan yahay in uu gacanta ku dhigay Suldaan Xasan oo haatan Götebobrg u jooga tababar uu uga qeyb galayo orodka 3000 ee metir ee maalinta talaadada ka furmaya garoonka Slottsskogen ee Göteborg. Waxaana Suldaan rajeeynayaa inuu jebiyo rikoorka da’yarta juunyeerka Iswiidhan u yaala.